Florence မုန္တိုင္း အႏၲရာယ္ႀကီးဆဲ
အေမရိကန္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသမွာ Florence ဟာရီကိန္း မုန္တုိင္းဒဏ္ကို ခံေနရဆဲ ျဖစ္ၿပီး ေျမာက္ကာရိုလိုင္းနား ျပည္နယ္ထဲမွာေတာ့ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ မိုးနဲ႔အတူ ေရႀကီးတဲ့ ဒဏ္ကို ခံေနရပါတယ္။
ေဒသခံေတြ ေရႀကီးတဲ့ အႏၲရာယ္သတိထားၾကဖုိ႔၊ ရာသီဥတု သတိေပးခ်က္ေတြကို နားေထာင္ၾကဖို႔နဲ႔ ေဘးလြတ္ရာ ေရွာင္ခိုင္းတဲ့အခါ စိတ္ခ်ရတဲ့ ေနရာကိုေရႊ႕ေျပာင္းၾကဖို႔ ေျမာက္ကာ႐ိုလိုင္းနားျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Roy Cooper က တနဂၤေႏြေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ထပ္ၿပီး သတိေပးေနပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ေရလွ်ံေနတဲ့ လမ္းေတြမွာ ေရက လက္မအနည္းငယ္ပဲ ရွိတာေတာင္ ကားေတြေမ်ာသြားႏိုင္တဲ့ အႏၲရာယ္ ရွိေနတာမို႔ အဲဒီလမ္းေတြေပၚ ကားျဖတ္မေမာင္းၾကဖုိ႔ သတိေပးထားပါတယ္။
Florence ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းဟာ အတၱလန္တိတ္သမုဒၵရာ အလယ္ပိုင္းကို ဦးတည္ၿပီး တျဖည္းျဖည္း ေရြ႕လ်ားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခါမွာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ရွိေနေပမယ့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း တခ်ိဳ႕ေဒသ ေတြမွာ မိုးေရခ်ိန္လက္မ အေတာ္မ်ားမ်ား ရြာသြန္းႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
အခုအခ်ိန္အထိ ဒီမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးရသူက ၁၄ ဦးထက္မနည္းရွိေနပါၿပီ။ တခ်ို႕ၿမိဳ႕ေတြဟာ ေရႀကီးတဲ့ ဒဏ္ေၾကာင့္ အဆက္အသြယ္ လံုးဝ ျပတ္ေတာက္ေနပါတယ္။ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးေတြ ေရလႊမ္းေနၿပီး ေနအိမ္ေပါင္း ၇၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္မီးမရဘဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။
ေျမာက္ကာ႐ိုလိုင္းနား ျပည္နယ္တြင္းက ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားကို ေလဆင္ႏွာေမာင္းအႏၲရာယ္ သတိေပးခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ေျမာက္ကာ႐ိုလိုုင္းနားျပည္နယ္တြင္း မုန္တိုင္းဒဏ္ အျပင္းထန္ဆံုး ခံရတဲ့ ၿမိဳ႕က New Bern ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိမွာ ေလတိုက္ႏႈန္း တနာရီ ၃၄ မိုင္ေလာက္ရွိေနၿပီး မိုးေရခိ်န္က ၁၅ လက္မကေန လက္မ ၂၀ အထိ ရြာသြန္းေနတာပါ။ ျမစ္ေရေတာ္ေတာ္နဲ႔ က်ဖုိ႔ မရွိတဲ့အတြက္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ အႏၲရာယ္က ရက္အေတာ္ၾကာ ဆက္ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္အထိ Florence မုန္တိုင္းဟာ အသက္အႏၲရာယ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိတဲ့ မုန္တိုင္းအျဖစ္ ရွိေနေသးတယ္လို႔ မိုးေလဝသပညာရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။
Manchester City: the Club welcomes the decision of the CAS and thanks for the correct judicial process
Mourinho's classic plan for big matches worked perfectly. Arteta's crude Arsenal isaconvenient target
Bartomeu on Xavi in Barca: There isatime for everything. We are not looking foracoach right now
Mourinho about the Europa League: Ask Hamilton if he wants to win Formula 2
ဖားကန့်တွင်သေဆုံးသွားခဲ့သူများအတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်းအဆို အတည်ပြု၊ လွှတ်တော်အမတ်များ ၁ မိနစ်ငြိမ်သက်ဆုတောင်း
အမေရိကန်တွင် ကျောင်းများပြန်ဖွင့်ရေး ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရန် ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအဖွဲ့ အကြီးအကဲပြော
နီပေါတွင် ရုတ်တရက် ရေကြီး မြေပြိုသဖြင့် ၁၀ ဦး သေဆုံး
မကွေးမြို့အနီး ရစ်(ခ်)တာစကေး ၄ အဆင့်ရှိ မြေငလျင်လှုပ်
Facebook တွင် နိုင်ငံရေးကြော်ငြာများ ပိတ်ရန် စီစဉ်နေ
ဝါရင့် ဟာသသရုပ်ဆောင် လူရွှင်တော်ကြီး ဦးမန်းဝင်းကွယ်လွန်
ကျိုက်ထီးရိုးဒေသ မီးဖြတ်ထားသဖြင့် ကလေးငယ်များ ပညာသင်ယူခွင့် အခက်အခဲရှိနေ
နာမည်ကြီး Crazy Rich Asians စာရေးဆရာ၏ ဝတ္ထုသစ်ကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမည်
တောင်အာဖရိကတွင် ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ များလာ၍ ညမထွက်ရအမိန့် ပြန်ထုတ်မည်
ဝါးခယ်မမြို့နယ် NLD ပါတီ အလုပ်အမှုဆောင်အားလုံး ပါတီတာဝန်မှ ရပ်နားခံရ
၂၄ နာရီအတွင်း ကမ္ဘာတဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ လူနာသစ် ၂ သိန်း ၃ သောင်းကျော် စံချိန်တင်တွေ့ရှိ
Toyota to Fully Resume Global Output for First Time Since February
ဧရာဝတီလင်းပိုင်(အမ) တစ်ကောင် သေဆုံး
Hong Kong Coronavirus Cases See Worst Surge Since Outbreak Began
မန်ယူအသင်းက လူငယ်ကစားသမားများကို ဆွဲဆောင်ဆဲဟု ဆိုးလ်ရှားပြော
တူရကီပြတိုက်ကို ဗလီအဖြစ်ပြောင်းလဲသည့်အပေါ် စိတ်ထိခိုက်ခံစားရဟု ပုပ်ရဟန်းမင်းပြော
အာဂျင်တီးနား၌ တရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ လူနာသစ် ၂၆၅၇ ဦး တွေ့ရှိ
ဂျာမနီရှိ ဆောင်ကြာမြိုင်များ ပြန်ဖွင့်ပေးရန် လိင်လုပ်သားများ ဆန္ဒပြ
အာဇာနည်နေ့တွင် ဥသြဆွဲရန်နှင့် ကားဟွန်းတီးရန် သမ္မတရုံး ညွှန်ကြား
ၵူၼ်းမိူင်းယု ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းလႆႈသူင်ႇတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ
အသင်းပြောင်းရွှေ့ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းမရှိဟု နာပိုလီနောက်ခံလူ ကူလီဘာလီ ပြော
အမျိုးသားလွှတ်တော်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးမတွေ့
တရက်အတွင်း ကြည့်ရှုသူသန်းချီရှိနေသည့် ရွှေထူးနှင့် ရွှေမှုံရတီ စုံတွဲသီချင်းသစ်(ရုပ်သံ)
မောင်​တောမြို့တွင် ​တောဆင်​ရိုင်း နင်းခံရသဖြင့် ရွာသား ၁ ဦး ​သေဆုံး
ဗင်းမ်မြို့ရှိ လယ်ကွင်းထဲက စက်ဝိုင်းပုံ ဂျုံပင်များကို လူရာချီ လာကြည့် (ရုပ်သံ)
ဂိုးမသွင်းနိုင်ပေမဲ့ ရက်ရှ်ဖို့ဒ် အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြသနေဟု ဖာနန်ဒက်စ် ချီးကျူး
လယ်မစိုက်ဘဲ ပုံစံ-၇ ထုတ်ပေးမှု ပြန်စိစစ်ပေးရန် ပေါင်မြို့နယ် လယ်ယာမဲ့ ဒေသခံများတောင်းဆို
ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် အမေရိကန်စစ်သင်္ဘော USS မီးလောင်၊ ၁၁ ဦး ဒဏ်ရာရ
အာဆင်နယ်အထက်ရပ်တည်ရေးက ဦးစားပေးပစ်မှတ်မဟုတ်ဟု မော်ရင်ဟို ပြော
အိန္ဒိယတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတိုးလာ၍ ပြည်နယ်အတော်များများ လော့ဒေါင်းချ
မြို့ခံတဦးကို လက်သီးဖြင့် ထိုးခဲ့မှုအတွက် ပုသိမ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ပြန်တောင်းပန်
အာဆင်နယ်ခံစစ်က ပြိုင်ဘက်ကို အမြဲတမ်းအခွင့်ရေးပေးနေဟု ဂျေမီရက်ခ်နက် ဝေဖန်
မန္တလေးတိုင်းအတွင်း စက်ရုံလုပ်သားများကို ဈေးနှုန်းသက်သာစွာ ဆန်ရောင်းချပေးမည်
အင်ဒိုနီးရှားတွင် တရက်တည်း ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ ၁၆၈၁ ဦး တွေ့ရှိ၊ ၇၁ ဦး သေဆုံး
လက်ကျန် ၃ ပွဲက အခက်အခဲဆုံးနှင့် အရေးကြီးဆုံးပွဲစဉ်များ ဖြစ်လာမည်ဟု ရီးရဲလ်နည်းပြ သုံးသပ်
သရက်မြို့တွင် အင်အား ၃ ဒသမ ၅ အဆင့်ရှိ မြေငလျင်လှုပ်
The Day General Aung San Gave His Final Speech
ကိုဗစ်-၁၉ လူနာသစ် ၁ ဦးတွေ့ရှိ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၄၅၂ ဦးတွင် ရောဂါပိုးမတွေ့
နီပေါဝန်ကြီးချုပ် ရှာမာအလီ ရာထူးမှထွက်ရန် ငြင်းဆန်
တရုတ်နိုင်ငံ ဖူကျန်းပြည်နယ်ရှိ ဇီဝလောင်စာစက်ရုံ ပေါက်ကွဲ၊ ၂ ဦး ပျောက်ဆုံးနေ
ဂျပန်ရောက် မြန်မာများ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်မဲပေးရန် စတင်လှုပ်ရှား
တက်စ်လာသူဌေးကြီး အီလွန်မာ့ခ်စ် ကမ္ဘာ့ ၇ ဦးမြောက် အချမ်းသာဆုံးဖြစ်လာ
ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ရုရှားပြည်သူထောင်ချီ ထောက်ခံဆန္ဒပြ
တာချီလိတ် ဘိလပ်မြေဖျော်လုပ်ငန်း၌ ဆက်ကြေးကောက်သူ ၃ ဦး RCSS/SSA အဖွဲ့ကမဟုတ်ဟု ငြင်းဆို
မကွေးတိုင်း၌ ယခုနှစ် ငါးမျိုးစိတ်ကောင်ရေ ၅၄ သိန်းကျော် ထည့်သွင်း
အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စများကို နာပိုလီနောက်ခံလူ ကူလီဘာလေ ပယ်ချ
အီရန်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ မကူးစက်စေရန် အခမ်းအနားများကို ပိတ်
ပီးရူးအစိုးရကို ကျန်းမားရေးလုပ်သားများ ဆန္ဒပြ
ကျောက်ဖြူမြို့နယ် စိုင်ခြုံကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအပါအဝင် ၃ ဦး ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရ
ဘောလီးဝုဒ်စတား အမီတာဘတ်ချန်းတို့သားအဖ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံရ
ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ ၆ နှစ်ကလေးအား ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ခက်ခက်ခဲခဲခေါ်ဆောင်ပြီး ဆေးရုံပို့ခဲ့ရ (ဓာတ်ပုံ)
မင်းလှမြို့နယ် ရေနံမနယ်မြေတွင် တရားမဝင်ရေနံချက်ဖို ဖမ်းမိ
ပုသိမ်မြို့က ဘူတာညစျေး ပြောင်းရွှေ့ရန် ကျပ် ၆၁ သန်းကျော် အသုံးပြုမည်
မော်လမြိုင် Quarantine စင်တာထဲ အရက်ဝင်သောက်သူ ၃ ဦးကို တရားစွဲ
အိန္ဒိယ၌ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ လူနာသစ် ၂၇၀၀၀ ကျော်တွေ့ရှိ
တရုတ်တွင် ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် ရေဘေးသင့်သူ ၃၄ သန်းခန့်ရှိ
ကိုဗစ်ကာလ ရပ်နားထားသည့် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများ MRCCI တွင် ပြန်ကျင်းပမည်
အိန္ဒိယပြန် တပ်မတော်သား ၃ ယောက်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးတွေ့
မြောက်ကိုရီးယားငရဲဘုံ(သို့)အကျဉ်းစခန်း ၁၄ မှ လွတ်မြောက်ခဲ့သူတယောက်အကြောင်း
ပုဏ္ဏားကျွန်းတွင် ပစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့် ဒေသခံ ၁ ဦးသေဆုံး၊ ၁ ဦး ဒဏ်ရာရ
မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်တွင် Quarantine ဝင်နေသည့် ထိုင်းကပြန်လာသူ ၁ ဦး ထွက်ပြေး
ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ အစိုးရ၏စီပွားရေးကိုင်တွယ်ပုံကို မကျေနပ်၍ အစ္စရေးပြည်သူထောင်ချီ ဆန္ဒပြ
တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင် ပြင်းအား ၅.၁ အဆင့်ရှိ ငလျင်လှုပ်
မာဆယ်လို ပေါင်ခြံဒဏ်ရာကြောင့် လက်ကျန်လာလီဂါပွဲစဉ်များ လွဲချော်မည်
တောင်အာဖရိကရှိ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတိုက်ခိုက်ခံရ၊ ၅ ဦးသေဆုံး
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးရှိ၊ မရှိ ထပ်မံစစ်ဆေး
ဩစတြေးလျကမ်းလွန်တွင် လူငယ်တဦး ငါးမန်းကိုက်ခံရပြီး သေဆုံး
ရသေ့တောင်တွင် အမျိုးသမီး ၂ ဦး သေနတ်ကျည်ထိမှန် ဒဏ်ရာရ
ကိုဗစ်-၁၉ကာကွယ်ရေးလုပ်ထားသဖြင့် မစိုးရိမ်ဘဲ ကျောင်းအပ်ပေးရန် မွန်ပညာရေးမှူး တိုက်တွန်း
ပွဲအမြောက်အမြား ကစားနေရသည့် ဂရင်းဝုဒ်အတွက် မစိုးရိမ်ဟု မန်ယူနည်းပြ ပြော
စိုက်ပျိုးစပါးဧက ၁၀၀ ကျော် ဖျက်ဆီးခံရသဖြင့် အင်းတော်ကြီး လယ်သမားများ တိုင်ကြား
အာဆင်နယ်နှင့်ပွဲက အဆုံးအဖြတ်ပွဲမဟုတ်ဟု စပါးနည်းပြ မော်ရင်ဟို သုံးသပ်
တာချီလိတ်၊ မိုင်းရယ်နှင့် ပုသိမ်ကြီးမြို့တို့တွင် ကျပ်သိန်း ၁၂,၀၀၀ ကျော်ဖိုး မူးယစ်ဆေးများဖမ်းမိ
နာပိုလီက ကူလီဘာလီကို မန်စီးတီး ကစားသမား ၂ ဦး အလိုက်ပေးကမ်းလှမ်းမည်
အဆိုတော် လင်းလင်းနှင့် ဇနီးချစ်သုဝေ ပုသိမ်ဆေးရုံကြီးကို သိန်း ၂၀၀ လှူ ဒါန်း
မလေးရှားနှင့် စင်ကာပူတွင် အခက်ကြုံနေသည့် မြန်မာသင်္ဘောသားများ အပါအဝင် ၂၄၀ ကျော်ကို ပြန်ခေါ်
ဂျာမနီ တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲများတွင် ပရိသတ် ရာချီ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ပြုမည်
ဧရာဝတီတိုင်း စက်ရုံအလုပ်ရုံ အလုပ်သမားများကို လူမှုဖူလုံကြေးငွေ သိန်း ၂၀၀၀ ကျော် ထောက်ပံ့
ဝက်စ်ဟမ်းကို ရှုံးခဲ့သည့် နော့ဝှစ်ချ်အသင်း တန်းဆင်းရပြီ
အင်္ဂလန်နှင့်အိန္ဒိယက ပြန်လာသူ ၄ ဦးတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိ
The Day Myanmar Said Farewell to Japan’s Maverick Wartime Spy
ၵူၼ်းမိူင်းလိူတ်ႇမႆႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထုၵ်ႇလႆႈၵႄႈလူၺ်ႈလၢႆးငမ်းယဵၼ်
ဥရောပတွင် အစုအပြုံလိုက်သတ်မှု ၂၅ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်ကျင်းပ
အဓမ္မပြုကျင့်ခံရမှုအတွက် ကာယကံရှင်အမျိုးသမီးက စစ်တွေမြို့မရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်
ဘရာဇီးတွင် ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ ၁.၈ သန်းကျော်နှင့် သေဆုံးသူ ၇ သောင်းကျော်ရှိလာ
အကြံပေး ရော်ဂျာစတုန်းကို သမ္မတ ထရမ့် ပြစ်ဒဏ်လျှော့
ချောက်စာသင်ကျောင်းများတွင် Social Distancing အညီ အချိန်ခွဲခြား သင်ကြားမည်
ကယားပြည်နယ်က ဝက်များ အာဖရိက ဝက်အပြင်းဖျားရောဂါကြောင့် သေဆုံးခြင်းဖြစ်
ဖားကန့် ဝှေခါကျေးရွာတွင် မြေပြိုမှုထပ်ဖြစ်နိုင်၍ နေအိမ် ၃၉ လုံး ပြောင်းရွှေ့ပေး
ဇူလိုင်လအတွက် မီတာခတွေကို ၇၅ ယူနစ်အထိ အခမဲ့သုံးခွင့်ပေးမည်
Social Distancing နှင့်အညီ ဇူလိုင် ၁၃ ရက် အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့် ကျောင်းအပ် လက်ခံမည်
ရုရှားရေတပ်နေ့အခမ်းအနား အမျိုးသမီးအမှုထမ်းများဖြင့် ပထမဆုံးကင်းလှည့်
ဆာဘီးယားတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ဘေး အစိုးရ၏ကိုင်တွယ်ပုံကို ပြည်သူများ ဆန္ဒပြ
နှစ် ၁၅၀၀ သက်တမ်းရှိ အဆောက်အအုံကို ပြတိုက်အဖြစ်မှ ဗလီအဖြစ် တူရကီ ပြောင်းလဲ
ဆိုင်ကယ်တိုက်မှု ကူညီပေးသူအား လက်သီးဖြင့်ထိုးသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးကို ဖမ်းဆီးအရေးယူ
YBS စီးနင်းသူ ပိုများလာ၊ တရက်ကို လူဦးရေ ၉ သိန်းကျော် စီးနင်း
အမေရိကန်၌ ၂၄ နာရီအတွင်း လူနာသစ် ၇၄၀၀၀ ကျော်နှင့် သေဆုံးသူ ၈၅၁ ဦးရှိ
ဆိုးလ်မြို့တော်ဝန်၏ ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်နေရာတွင် ပြည်သူများ လာရောက်ဂါရဝပြု